होमआईसोलेनमा बसेका कोरोना संक्रमितका लागि उपयुक्त सुझाव – Dullu Khabar
होमआईसोलेनमा बसेका कोरोना संक्रमितका लागि उपयुक्त सुझाव
by डा. शंकर रिजाल
२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार १६:०६
के कोरोनाले संक्रमण गर्दैमा मान्छे मरिहाल्छ त ? अनि बाँच्नलाई सबैलाई अक्सिजन सिलिण्डर नै चाहिन्छ त ? हामिले सबै भन्दा पहिला कोरोना भएका सबैको बाँच्ने आधार अक्सिजनसिलिण्डर नै हो । र, पल्स अक्सिमिटर नै हो भन्ने भ्रम बाट अलि गहिरिएर सोच्ने गरौँ ।
कोरोना लागेका सबैलाई अक्सिजन नै आवश्यक पर्छ भन्ने हुदैन् ।
अक्सिजन आवश्यक पर्ने केहि अवस्था हुन्छन् । त्यी अबस्था बाहेक सबैलाई आईसीयु, भेन्टिलेटर, अक्सिजनको जरुरी हुँदैन। अघिल्लो बर्ष कोरोना परिक्षण सहज रुपमा जता–ततै गर्न ४/६ महिना लागेको तपाई हामीलाई थाहै छ । यो बर्ष परिक्षण गर्न सहज भएर सबै तिर प्रयोगशालाको सुविधा भएर धेरैले जाँच गर्ने अवसर मिलेको छ । फलस्वरुप एकै पटक संक्रमणको दर गत बर्ष भन्दा बढीरहेको जस्तो देखिएको हो ।
यो केही समयमा अघिल्लो बर्ष जस्तै कम हुदै जानेछ । संक्रमण हिजो पनि थियो । आज छ पनि र केही समय यस्तै हुने छ । हामिलाई धेरै कुरो मा भ्रम, त्रास, डर पनि उत्तिकै छ। पहिलो चरणमा पनि थियो र अहिले दोस्रो चरणमा पनि छ । अतः भयावह त्रास, डरमा हैन् मनोबल उच्च बनायर कायम गरौँ । बीना लक्षण भएका पनि त पोजेटिभ देखिएका छन् ।
दुई मात्रा भ्याक्सिन लगाएकामा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । कतै बाहिरी नगयर घरमा बसेकामा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको अबस्था छ ।
त्यसैले सचेत बनौँ, निरास होइन् । संक्रमित भएका झण्डै ८५ प्रतिशत संक्रमितलाई घरमै बसेर निको भएको छ । घरेलु विधि, जडिबुटीको सेवनबाट पनि कति घरै बसेर निको भएका छन् । १५ प्रतिशतलाई अस्पतालको सुविधा आवश्यक देखिएको छ । ५ प्रतिशतलाई आईसीयुको आवश्यक परेको छ ।
समाचार हेरेर, सुनेर आत्तिनु हुँदैन् । सदा मनोबल उच्च राख्नुपर्दछ । कोरोना लाग्दैमा मृत्यु हुदैन् । जति सकिन्छ प्राकृतिक, खानपिन, आहारविहार, प्राकृति जिवनशैलि अबलम्बन् गरौँ। प्रकृतिको विरुद्धमा नलागौँ । रोग प्रतिरोधात्मक उपायहरु र त्यस्ता जडिबुटीको निरन्तर सेवन गरौँ, सदा सकारात्मक सोचका साथ जिवन जिउने प्रयत्न गराैं ।
डर, भ्रम, भए, त्रास भन्दा ठूलो कूनै रोग र भाईरस छैन् । उच्चमनोबल, सकारात्मक सोच, प्रकृति सँगसँगै जिउनु भन्दा ठूलो कूनै भ्याक्सिन अनि औषधि पनि छैन् ।
कोरोना संक्रमण भएमा घरमै आफैले गर्न सकिने महत्वपुर्ण उपायहरु :
– एक बुढी औँला जती मोटो र बुढी आँैलाजती लामो गुर्जो वा ३ देखि ५ ग्राम गुर्जो पाउडर २ कप पानीमा राखेर मन्द आगोमा पकाउने । आधा भएपछि छानेर पीउने आवश्यकतानुसार मह, गुढ, मिश्रि मिसाएर लिन सकिन्छ । वा प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुर्खेतबाट निःशुल्क वितरण भएको गुर्जो आदी मिर्सीत योगको प्रयोग गर्ने ।
– जेठी मधुकने चुर्ण ३ ग्राम र अश्वगन्धा चुर्ण ३ ग्राम बिहान बेलुका खाली पेटमा मनतातो पानी संग खाने ।
– कागती पानी तातो, दिनको २ पटक खाने वा अमलाको रस १० देखि २० एमएल लिने ।
– सुख्खा खोकी लागेमा अदुवाको टुक्रा पोलेर चुस्ने वा ल्वांग, सुकमेल चबाउने, हर्रोको फललाई हल्का बोलेर मुखमा राखि चुस्ने वा कालो जिरा १ -२ ग्राम पनि लिन सकिन्छ । खोकी बढी लागेमा आयुर्वेद औषधि खानु पर्ने हुन्छ ।
– स्वर बसेमा बोझोको वा खयरको सानो टुक्रा मुखमा राखेर चुस्ने ।
– नाख बन्द भएमा टाउको दुखेमा साझ बिहान सफा पानी को वाफ लिने वाफ लिँदा ज्वानो, असुरो, कर्पुर, लेमनग्रास, तुलसी आदिको पात राखेर लिन सकिन्छ । वा तोरीको तेल, तिलको तेल, बदाम तेल, २-३ थोपा दुबै नाक मा वाफ लिए पछि राख्ने ।
– घाटि दुखेमा मनतातो पानी वा पानीमा थोरै नुन बेसार राखेर मुखकुल्ला गर्ने ।
–ज्वरो, छाति दुख्ने, खोकी, शरीरको दुखाई भएमा असुरोको पात, तुलसीपत्र, चिराईतो , कण्टकारी, तेजपात, दालचिनि, अदुवा, चन्दन, राम्रोसंग छिप्पिएको गुर्जाेको काण्ड कुटेर, मरिच राखेर उमालेर चिया जति दिनमा ४–५ पटक पिउनुहोस् । धेरै ज्वरो आएमा सिटामोल पनि लिन सकिन्छ ।
– पखाला वा पाचन प्रकृयामा समस्या भएमा बेलामा, आपका पिपलका कलिला पात ४÷५ वटा धोएर दिनमा ४–५ चपाएर खानुस् । साथै दाल/तरकारी हिंगले झानेर वा राखेर खाने गर्नुस् । साथै खाना र चटनीमा वीरेनुनको प्रयोग बढाउनुस् । वा काच्चो बेलको गुदि, धाईरो फुल, आपको कोया, काफलको बोक्रा, जामुनाको बोक्रा अनारको बोक्रा भुटेको धनियाँ, जिरा सौप यी मध्ये कुनै एक वा सबै मिलाएर ३ देखि ५ ग्राम वा रस २० एमएल जति खाने । वा भकिअम्लो ३ ग्राम र दहिको पानी को सेवन गर्ने ।
–.झोलीलो कुरा प्रशस्त खाने । सके सम्म चनाको झोल, ज्वानोको झोल प्रशस्त खाने । मनतातो पानी बेला–बेलामा खाने ।
– स्वस्थ जीवनशैली, खानपिन गर्ने तरिका, व्यायाम, योग, प्रणायाम आदि कुराले कोरोना लगाएत सर्ने, नसर्ने दुवै रोगमा फाईदा गर्छ । स्वास्थ रहन शरीरमा सकेसम्म प्राकृतिक रुपले अक्सिजनको मात्रा बढाउन जरुरी हुन्छ । खुला अनि झ्याल ढोकाभएको स्थान मा बस्ने वा सके सम्म खुला एकान्त स्थानमा बस्ने ।
– अनुलोम बिलोम – यो अभ्यास कमसे कम १० पटक गर्दा शरीरलाई फाइदा हुन्छ । यो प्राणायम शरीरको लागि अत्यन्त आवश्यक छ ।
– कपालभातिमा लामो सास लिँदै फाल्नु पर्ने हुन्छ । यो गर्दा शरीरमा प्रसस्त मात्रामा अक्सिजन पुग्छ । यो अभ्यास कमसे कम १० मिनेट बिहानको समयमा गर्दा फाइदा पुग्छ । यो कुनै पनि समयमा गर्न सकिन्छ ।
– श्वासकै अरु प्रणायाममा भस्त्रिका, उज्यायी, शीतकारी आदि गर्न सकिन्छ । साथमा सिंहासन, बालाशन पनि बहुउपयोगी छ । घोप्टिएर सुत्ने ( एचयलभ उयकष्तष्यल) मा पनि अक्सिजन वढाउन ज्यादै उपयोगी छ । पल्स अक्सिमिटर भए औँलामा राखेर अक्सिजन नाप्ने अक्सिजन्को मात्रा ९४ प्रतिशत भन्दा कम भए खुला हावा लाग्ने ठाउमा बिरामीलाई घोप्टो पारेर सुताउने । अनुलोम विलोम वा लामो श्वास बेलाबेलामा लिइरहने ।
– सम्पूर्ण औषधि, पानी सबै खाई सकेपछि सुत्नु भन्दा अगाडी एक गिलास तातो पानीमा वा दुध मा सानो चम्चाको १ चम्चा बेसार राखि पीउने ।
– प्रयाप्त मात्रामा आराम गर्ने । तनाव, भय, त्रास हुने काम नगर्ने ।
– मनोबल उच्च राख्ने, परिवार, आफन्त र समाजले सहयोग, सदभाव बढाउने । नेपाल सरकारले भनेको नियमहरुको पालना गर्ने ।
– यस वाहेक लक्षण अनुसारका अन्य आयुर्वेद औषधि चाहिन सक्छ । त्यसको लागि थप सल्लाह सुझाव चाहिएमा आयुर्वेद चिकित्सकसंग वा आयुर्वेद अस्पतालमा सम्पर्क गर्ने।
– निमोनिया वा स्वास प्रस्वासमा कुनै समस्या भएमा वा श्वास लिन गार्हो महसुस भएमा तत्काल नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्ने ।
अन्तमा : यो महामारीको तेस्रो लहर चौथो लहर न आउला भन्ने आधार त केहि छैन् । हप्ता हप्तामा लकडाउनको मिति परिवर्तन मात्र गरेर लामो समय सम्म बन्द गरी हाम्रो जस्तो देशमा यो समाधानको अचुक उपाया होईन् । र, हुनै सक्दैनन् । किन कि ७० प्रतिशत मान्छे गाउँमा नै छन्। गाउँमा लकडाउनको कुनै परिकल्पना हुदैन् । कतै आभाष नै छैन् ।
आयुर्वेदिक चिकित्सक डा. शंकर रिजाल प्रदेश आयुर्वेद औषधालय सुर्खेतका प्रमुख डाक्टर हुन् ।
Tags: काेराेना कहरप्रदेश आयुर्वेद आैषधालयस्वास्थ्य टिप्स